Ihe omuma: Ihe mere i ji choro ilekwado ahia ahia di iche
Ugbu a, n'ihi nyochaa na uru ndị na-esite na ya, omenalaazụmahịa na-amalite na-aghọta na ha ga-erite uru karị ma ọ bụrụ na ha natara ahịa dijitalụ.
"Afọ nke mobile" bụ okwu nke ụwa dijitalụ ruo ọtụtụ afọ.A na-ekwu na afọ 2014 bụ nke atọ nke "afọ nke mobile" - moweb. N'afọ ndị sochirinụ, ruo 2016, natara nke amkpuchi dịka NdụHack. Ọ na-ezo aka na mmụl nwayọọ nwayọọ nke ngwaọrụ mkpanaka na-eto eto na-aghọ isiikpo okwu na-agagharị na weebụ ma ọ bụghị otu afọ.
Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha ,Andrew Dyhan, na-enye nghọta maka ihe dị mkpa nke ahịa dijitalụ di na ya na mkpa ọ dị ugbu a.
Ọnụ ọgụgụ na-egosi na:
Ntinye ego mgbasa ozi nke Facebook maka 2016 bụ $ 26. Ngwa mkpanakanke ruru pasent 80 nke nke ahụ ($ 21.98)
Ruo pasent 69 nke mmepụta ihe ngosi dijitalụ nke mgbasa ozi nyochaa na ngwaọrụ mkpanaka.
N'iji ihe karịrị nde mmadụ ise, Instagram dịka onye na-eto eto ngwa ngwanetwọk ma jikọta ngwa ngwa na ahịa Facebook.
Nweta data sitere na Nchịkọta Nlekọta, post e-Marketer, azụmahịa obere na nke na-ajụna United States na-eme atụmatụ imefusị ihe na mgbasa ozi ma tinyekwuo uche na ndị ọrụ ugbo na 2017. Ihe kpatara mkpebi a bụ na kariandị mmadụ nọgidere na-enwe smartphones. Pasent 80 nke ndị na-ahụ maka ịntanetị na United States nwere smartphone nke dabeere na nsonaazụ siteComScore. Ụfọdụ n'ime ihe mere smartphones na-aga n'ihu na-amụba bụ n'ihi na Apple mepụtara C-usoro maka iPhone,Android nwere obere smart smartphones na ọtụtụ ndị na-ebu na-enye pụọ, na ike abụọ-aka ama ahịa ebe.
Ụfọdụ n'ime ohere maka ịzụ ahịa na-agụnye:
Google AdWords na Facebook Mgbasa ozi maka iche iche mpaghara.
SnapChat nzacha iji nwaa ndị ọrụ n'otu ebe..
Mgbasa ozi Yelp enyere aka n'ịnye ụlọ ọrụ na profaịlụ profaịlụ na Yelp.
Ọganihu Instagram na mgbasa ozi.
Ụlọ ọrụ ndị omenala kwesịrị iji uru ụgbọ oloko ahụ. Ma ọ bụghị ya,ndị egwuregwu kacha elu ga-ewepụta ha.
Mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere azụmahịa na ahịa ahịa, ọkpụkpọ Amazon na-agbanwe mgbe nileelu na mkparịta ụka ha. Ihe karịrị nde mmadụ 80 na-akwụ ụgwọ na azụmahịa Amazon. Nbudata aha ntinye maka Amazon ruruOjeri $ 8, ọ bụghị ọnụahịa nke ndị na-emefu na Prime.
Amazon dara n'okpuru ụdị nke nnukwu ụlọ ọrụ. Ajụjụ bụ ma aazụmahịa obere ma ọ bụ nke obodo nwere ike ịlụ ọgụ na ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ. Ọ dị nnọọ mfe, kama ọ chọrọ ọrụ dị ukwuu n'aka ndị ahịa ha.
Ihe mgbasa ozi dijitalụ dị nta na mpaghara kwesịrị ime
E nwere ebe anọ na ụlọ ahịa kwesịrị ileba anya ma ọ bụrụ na ha ga-adịgide ndụụwa dijitalụ. Ha nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ niile, mana ha na-arụ ọrụ dị mma:
1. Ntanetị mgbasa ozi na-eji Facebook, ma ọ bụ Instagram.
2. Na-ebuli mmalite nke na-enyere ndị ahịa aka ịhazi ma na-azụta ịntanetị dị otú ahụdị ka Seamless, Instacart, Caviar, na ndị ibe ya.
3. Na-enye ọhụụ ma ọ bụ ọnọdụ dị elu nke na-enye ndị ahịana ịzụ ahịa dị mfe.
4. Wụpụtara ọwa ahịa e-azụmahịa. Na ndị a, otu nwere ihe eji eme ihe dị kare-ezubere site na mgbasa ozi mgbasa ozi (Facebook) ka iwelie ahịa.
Ọ dịghị mfe maka obere ụlọ ọrụ n'ihi asọmpi siri ike. Olileanya,ihe ọmụma site na Semalt na-enye ìhè ihe ole na ole ha nwere ike ime iji nọgide na-aba uru ma nọgide na-eto eto.